Ijaji laseburhulumenteni limisa isigunyaziso sokugonya i-United Airlines COVID-19
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » Ijaji laseburhulumenteni limisa isigunyaziso sokugonya i-United Airlines COVID-19
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Ijaji laseburhulumenteni limisa isigunyaziso sokugonya i-United Airlines COVID-19.
Ijaji yayalela ukuthintela okwethutyana kwi-United Airlines, kuthintela inkampani ekunyanzeliseni igunya layo lokugonya le-COVID-19 kubaqeshwa kunye nokubeka abasebenzi abacela ukukhululwa kwikhefu elingahlawulelwayo.
UMgwebi weSithili sase-US u-Mark Pittman uphendule kwisenzo seklasi esenziwe ngummangali kunye nomphathi we-United Airlines u-David Sambrano, umhlali wase North Texas.
U-Pittman wayalela ukuthintela okwethutyana kwi-United Airlines, ethintela inkampani ukuba inyanzelise igunya layo lokugonya kubasebenzi.
Irhuluneli yaseTexas uGreg Abbott ukhuphe umyalelo olawulayo othintela naliphi na iziko eTexas ekugunyaziseni ugonyo lweCovid-19 lwabasebenzi okanye abathengi.
UMgwebi weSithili sase-US u-Mark Pittman uphendule kwityala lomdibaniso ngokuchasene ne-United Airlines efakwe ngabasebenzi beenqwelomoya abathandathu ngokuyalela umphathi ukuba ayeke okwethutyana igunya lokugonya le-COVID-19 eliza kubeka abasebenzi abangagonywanga kwikhefu elingahlawulelwayo.
U-Pittman ukhuphe i-odolo yakhe ephendula inyathelo leklasi eliziswe ngummangali kwaye United Airlines ukapteni uDavid Sambrano, umhlali waseMantla eTexas.
USambrano wayengomnye wabasebenzi abathandathu abafaka isimangalo somdibaniso besithi kukho ipateni yocalucalulo kwinqwelo-moya esekwe eChicago; "Baye bacela indawo yokuhlala yezenkolo okanye yezonyango kwigunya le-United lokuba abasebenzi bayo bafumane isitofu sokugonya se-COVID-19."
Ijaji iye yayalela ukuthintela okwethutyana United Airlines, Ukuthintela inkampani ekunyanzeliseni igunya layo lokugonya le-COVID-19 kubaqeshwa kunye nokubeka abasebenzi abacele ukukhululwa kwikhefu elingahlawulelwayo. Umyalelo wesithintelo uphelelwa nge-26 ka-Okthobha. Inika ijaji ixesha lokumamela iingxoxo ezifanelekileyo zabasebenzi kunye neenqwelo moya.
Abaqeshwa, abafake izikhalazo zabo ngoSeptemba 21, baphikisa ngelithi ukubeka abasebenzi kwikhefu elingahlawulelwayo ayiyondawo ifanelekileyo yokuhlala, koko “sisenzo esibi sengqesho” kwaye ke ngoko lubonisa ucalucalulo.
USambrano ngokwakhe ufake isicelo sokuxolelwa kwezonyango, emva kokuba efumene kwakhona kwi-COVID-19. Uthi isicelo sakhe saliwe yinkqubo yokuhlala yase-United.
United Airlines yabhengeza nge-6 ka-Agasti ukuba izakufuna bonke abangama-67,000 babasebenzi base-US ukuba bafumane i-jab. Ngexesha lokubhengezwa, i-airline yacebisa malunga neepesenti ezingama-90 zabaqhubi beenqwelo moya kunye ne-80% yabasebenzi beenqwelomoya. Yathi inani elincinci labasebenzi abalalayo ugonyo luzakubekwa kwikhefu elingahlawulelwayo.
I-airline ithi "yenza umzamo olungileyo wokulawula ukhuseleko emsebenzini kunye nokubonelela ngendawo efanelekileyo yokujongana neemeko ezingazange zibonwe kwaye zikhula ngokukhawuleza" kwaye ifake isicelo sokuchithwa kwetyala.
Ngelo xesha, Irhuluneli yaseTexas uGreg Abbott ikhuphe umyalelo olawulayo othintela naliphi na iziko eTexas, kubandakanya amashishini abucala, ekugunyaziseni ukugonywa kwe-COVID-19 kubasebenzi okanye kubathengi.
I-United Airlines Imbali yamaNqaku e-COVID-19 Nightmare ...
I-2021 yee-10 eziPhezulu zeHlabathi zeHootspots zityhilwe